KALLUUNKA "QASNADDA": SHARAXAADDA KALA DUWAN, SAWIR - KU'SAABSAN
"Qasab" waa nooc cusub oo dufan badan oo dhoobo ah.
Maqaalkani, waxaan kugu martiqaadaynaa in aad barato sharaxaadda noocan ah pear, kala hadal farsamooyinka iyo xayawaanka, iyo sidoo kale baro qaar ka mid ah sharciyada muhiimka ah ee daryeelka geed.
"Qasab" - waa fikrad cusub oo xulashada koonfurta. Kala duwan ayaa laga helay Machadka Cilmi-baarista Farsamada Cilmi-baarista ee Moldavian of Chorticulture, Viticulture iyo Winemaking. Cilmi-beeraley-muwaadiniin muusik ah K. K. Dushutina ayaa soo saaray noocyo kala duwan. Laba nooc oo Faransiis ah ayaa loo doortay saldhig: weyn-"Jiilka Wanaaga ee Vienna" iyo jiilaalka "Olivier de Serres". Qayb badan oo ka mid ah xogta tayada iyo noocyada kala duwan ee guryaha ayaa laga helay noocyo cusub oo ka yimid Faransiiska "qaraabo", sidaas darteed noocyada badanaa waxaa badanaa loo yaqaanaa "Parisian".
Pear Tani waxay si fiican u qabatay Moldova iyo kaynta-kore ee Ukraine. Kala duwan ayaa lagu guuleystaa cilmi baarayaal ka socda Belarus.
Geedka gaaban, dhererka ugu sareeya waa 2 mitir. Jilifka ku yaal qaybta jirridda ka soo jeeda qolfaha xididka ilaa lafaha kowaad ee tier hoose ee taajka, iyo sidoo kale on laamaha ugu weyn ee uu leeyahay midab, midab madow mugdi ah. Caleenta lafteedu waa mid ballaaran-giraan ah. Laamood waxay ka soo baxaan jirridda geed oo ku dhawaad ​​xagal quman; oo dhammaadkeeduna wuxuu noqday sidii ajanabi oo kale.
Stems waxay leedahay celcelis ahaan qaro weyn. The midabka ee afkoda waa saytuun-jaalaha ah. On the afkoda mid ka mid ah karaa daaweyn kartaa tubercles weyn oo midab huruud ah. Caleenta wuxuu celcelis ahaan ka tegayaa caleenta. Saxanka xaashida ee ukunta ah (calaamadda ugu dambeysa), dusha sare ee mataanka. Caws cagaaran oo dherer ah iyo dhumucdiisuna waa weyn ama dhexdhexaad ah.
Muujinta shakhsi ahaaneed ee qaab-dhismeedka "Qasnadda" waa mid adag. In geedo miro, dhexroorka qaybta dhulka hoostiisa waa qiyaastii siman yahay dhexroorka qaybta kor ku xusan. Marka la isku daro pear nidaamka asaasiga ah wuxuu kordhay wax kabadan 2.5 kr. Iyada oo ku saleysan arintan, isbedelka hababka agrotechnical ayaa loo baahan yahay - qodo, waraabiyo iyo bacarimiso.
Dhisida beertaada beertaada, fiiro gaar ah u leh noocyada Yakovleva, Cathedral, Rossoshanskaya, Bergamot, Duchess, Lada, Severyanka, Nika, Elena, Fairy Tale, Otradnenskaya, Avgustovskaya dheehn.
Guusha ugu weyn ee dhoobada Dushutina waa miraha geedka - waxay yihiin kuwo aad u ballaaran, iyo dhadhanka waa macaan. Miro ayaa ah hal-cabbir, miisaanka pear kasta waa qiyaastii 200-290 g Inta badan miisaanka miro ayaa gaaraya 300 g, mararka qaarkood waxaa jira kooxo culeyskiisu yahay ilaa 500 g (rootstock).
Geedka ayaa gaaban, gogol xaar ah, oo aan ahayn mid adag. Nidaamku waa mid furfuran, wuxuu leeyahay qaabka caadiga ah ee mawjadaha dheeraadka ah. Si kastaba ha noqotee, dusha sare waa mid aan cidhiidhi ahayn, oo leh finan. Maqaarku waa qaro weyn yahay. Marka uu bislaado, maqaarka cagaaran iftiinkiisu wuxuu dhalaalaa oo wuxuu noqdaa mid hurdi ah.
On maqaarka, waxaad arki kartaa meelaha dushiisa (lafaha iyo jaranjaro). Meelaha noocan oo kale ah, haddii la sameeyo, ka dibna iftiin, dhawaaqa orange. Qiiqa ka soo baxa uumiga ah ee saliidda, jilicsan, caddaan leh qulub, leh diirad weyn oo casiir ah. Dhadhamin aad u macaan, macaan, macaan oo leh midab yar.
"Qasab" waxa loola jeedaa geedaha iftiinka leh. Iyadoo la'aanta iftiinka, geedka ayaa si liidata loo sameeyay, dhalidoodu way yar tahay. Darajada iftiinka waxay sidoo kale saameysaa tayada noolaha geedka. Shuruudda ugu weyn ee caymiska "Parisian" wuxuu ku sameeyaa wajiga murgashashada iyo samaynta midhaha, ugu yar - marxaladda kale. Saamaynta la'aanta iftiinka ayaa ah is-beddel la'aanta burooyinkeeda ubaxa.
Kalluunka "Treasure" wuxuu caadi ahaan ku koraa kolchatka. Laakiin haddii aad rabto inaad muujiso suurta galnimada sare ee warshadda, waxaa lagama maarmaan ah in lagu isticmaalo nafaqo leh nafaqo leh, oo si fiican u kulul oo qoyan, oo ay ku jiraan kuwa khafiifka ah, ee sii kordhaya.
"Parisian" ayaa si wanaagsan u koraaya carrada yaryar oo dhexdhexaad ah. Nafaqooyinka noolaha iyo macdanta ayaa sidoo kale saameyn togan ku leh koritaanka geedaha iyo midhaha.
Waa muhiim! Cimilada qalalan, codsiga dharka sare waa in lagu daro waraabka.
Qasnadda ma aha geed isku mid ah bacarimiso. Si pear si loo pollinated, waxaa lagama maarmaan ah in la beero pollinators ee ku xiga. Doorka pollinators ku haboon dhirta in ubaxyada marxaladaha hore. Rugaha ugu fiican ee kiiskan waa noocyada soo socda ee isteroberi: "Shirka", "Klapp's Pet", "Motley July", "Bere Mlievskaya", "Williams", "Thawing", "Josephine Mechelnskaya", "Deccan du Comis".
Kala duwanaan laguma xisaabin karo skoroplodnymi. Geedku wuxuu geli karaa miraha sannadka afraad kaddib marka la beero. Iyo midhaha aad u fiican oo ay u ballan qaadeen iibiyayaashu, waxaad sugi doontaa 5-7 sano ka dib markaad beerto. Muddadan ka dib, geedka wuxuu marwalba si joogta ah u miro dhaliyey si deeqsinimo leh.
Sida bannaanka u fiirsada, geedka a yar yar blooms aad u luxuriantly iyo fara badan, mararka qaarkood xitaa markii labaad, iyo waxa la yaab leh in aan la mid ah fruiting badan oo kale.
Marka la eego Bisaylka "Qasnadda" waa noocyo hore. Isteroberka dillaacsan xilliga dayrta. Miraha u bislaadaan si siman, on laamuhu waxaa si hufan u dhaw, ku dhowaad oo aan hoos u dhaco. Bisaylka la kala saari karo ee pear ku dhacaa bartamihii Sebtembar, iyo qaangaadhka macaamiisha - wax yar ka dib, bilowga October.
Geedka geedo jarjaran ayaa siinaya heer sare oo xasilloon, iyada oo aan dhexdhexaadin. "Qasab" si dhakhso ah u kordhiso goosashada. Iyadoo uu jiro 10 sano jir geedka, waxaad heli kartaa ilaa 100 kg oo miro ah.
Ma taqaanaa? Ka hor inta uusan Christopher Columbus keenin caleemo tubaako ah qaarada yurub, dadka reer Yurub waxay si weyn u cabbeen caleemo pear.
Sida suuq-geynta iyo gaadiidka, kala duwanaanta ayaa sidoo kale si fiican u xaqiijisay. Khudbadda Hantidhowrka waxaa lagu kala soocayaa tayada haynta wanaagsan, kuwa isdabajooga ah waxay ku hayaan guryaha organoleptic mudo dheer.
Iyadoo ku xiran shuruudaha, miraha waxaa lagu keydin karaa ilaa iyo January-Febraayo iyo xataa waqti dheer. Waxay ku kaydsan yihiin qaboojiyaha illaa November-December, iyada oo aan lumin dabeecadaha dhadhanka. Si aad u ilaaliso miraha xitaa wakhti dheer, u wareeji qolalka qabowga halkaas oo heerkulku uu kudhow yahay 0 ° C oo qoyaanku waa qiyaastii 85%. Xaaladahan oo kale, miraha waxay haysan tayada ganacsi illaa bisha Janaayo.
Kala saar "Qasnadda" waa mid aad u adkaysata horumarinta cudurrada kala duwan iyo weerarrada dulin. Nasiibku maaha mid saameyn ku yeeshay qolofta, waa wax aad u fiican in laga hortago jirrooyinka qanjirada, kalluunka miraha, iyo kansarka bakteeriyada.
Waa muhiim! Xilliga xagaaga, dhirta geedaha waxay u baahan yihiin waraabin degdeg ah, khaasatan meelaha jawiga kulul leh. Habka ugu fiican ee waraabinta waraabka. Intaa waxaa dheer, marmariba waxaa lagama maarmaan ah in ay roobka u dulqaado. Nidaamkani wuxuu kaa caawin doonaa in aad iska maydho boodhka caleenta iyo ilaalinta dhirta ka soo weerarta suurtagalka ah cayayaanka.
Ka hortagga barafku waa dhexdhexaad. Xilliga qaboobaha (oo ka hooseeya -20 ° C), waxaa jira fursado ah barafow, taasoo ka dhalatay taas oo dhaliddu si weyn u yaraatay sanadkan.
Asalka koonfurta ee foomka ayaa ka muuqda xaqiiqda ah in geedku uu ku filan yahay in uu hoos u dhaco heerkulka inta lagu jiro marxaladda gaduudka. Xaaladda isbedelka xilligaan waxay noqon kartaa qiimaha +15 ° C (oo ka hooseeya tilmaamahan, geedi socodka bacriminta ayaa dhacaya marar badan).
"Qasab" waa miro macmacaan leh saxarad jilicsan. Miraha waxaa loogu talagalay isticmaalka cusub.
Miro cusub ka hor isticmaalka, waa in la nadiifiyo maqaarka cufan. Si kastaba ha noqotee, isku day in aad maqaarka maqaarka leh ka saaro lakab khafiif ah, tan iyo qaybta sare ee saxarka waxaa ku jira fiitamiin badan iyo walxo macaan.
Ugu dambeyntii, waxaan si kooban u soo bandhigi doonaa faa'iidooyinka iyo khasaarihii suuragalka ah ee pear Treasure.
Miro qurux badan oo tayo wanaagsan leh;
Waxsoosaar sarreysa (fruiting joogto ah oo badan);
macmacaan (macaan) dhadhan;
caabbinta cudurada (gaar ahaan qolofta).
Shuruudaha warshadda ee jawiga iyo xaaladaha cimilada;
awood la'aanta is-isu-dhajinta;
caabbinta barafka yar.
Ma taqaanaa? Shiinaha qadiimiga ah, pear waxaa loo tixgeliyaa calaamad aan dhimanayn. Tani waxay sababtay awoodda cajiibka ah ee qoryaha. Si aad ula kulanto geedka qumbaha jaban wuxuu ahaa mid xun. Haddii qof shaqsi ahaan u dhaawacmo geedka, xitaa si ula kac ahTan macneheedu waxa weeye in maalmaha ninkaasi la tiriyo.
By beerta a pear Treasure ee beertaada, waxaad ku raaxaysan doonaa miraha qurux badan sanado badan. Geedkani wuxuu noqon doonaa raad dhab ah beertaada.